यिनै हुन् एक वर्षअघि सार्वजनिक बसमा अ श्ली ल ह र्कत गरेर युवतीको कपालमा वि र्य झा र्ने व्यक्ति ! - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यिनै हुन् एक वर्षअघि सार्वजनिक बसमा अ श्ली ल ह र्कत गरेर युवतीको कपालमा वि र्य झा र्ने व्यक्ति !
यिनै हुन् एक वर्षअघि सार्वजनिक बसमा अ श्ली ल ह र्कत गरेर युवतीको कपालमा वि र्य झा र्ने व्यक्ति !
काठमाडौं, २९ पुस । एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ‘बसकाण्ड’मा संलग्न युवक प क्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा चितवन भरतपुर घर भई बानेश्वर बस्ने रविन सार्की भन्ने रविन रुचाललाई रहेका छन् । उनलाई सोमबार साँझ चितवनबाट प क्राउ गरि काठमाडौं ल्याइएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बाट सारा नेपाली लाई खुसिको खबर
स*म्पतिको लो*भ ग*र्नेहरुले क*म्युनिस्ट पार्टीको रा*जनीति गर्न स*क्दैन : सी जिनपिङ
३० यात्रु बोकेको बस बैतडी मा दु*र्घट*ना : ७ जना ग*म्भीर घा*इते